dimanche, 22 décembre 2019 19:08
Baskety – Africa League: Patriots BBC Rwanda # GNBC Madagascar ny famaranana
Hotanterahina anio 22 desambra 2019, amin’ny valo ora sy sasany alina, ora eto Madagasikara, ny lalao famaranana ny Africa League Top 16, faritra Atsinanan’i Afrika, izay atao any Kigali renivohitr’i Rwanda. Hinaona amin’izany ny Patriots BBC Rwanda sy GNBC Madagascar. Fihaonana fanindroany ho an’io klioba roa tonta ireto io ; nivoaka mpandresy ny Patriots BBC Rwanda tamin’ny lalao voalohany. Toy ny hanala vela ny GNBC Madagascar, ekipan'ny zandarimariam-pirenena Malagasy, amin’ity famaranana ity.
dimanche, 22 décembre 2019 19:01
Baskety-Afroleague: Tafita hiatrika famaranana ny GNBC Madagasikara
Lavon'ny GNBC, ekipan'ny Zandarimariam-pirenena Malagasy, tamin'ny isa 94 noho 90 teo amin'ny manasa-dalana omaly sabotsy 21 desambra ny Clube Ferroviario de Maputo avy atsy Mozambika. Tafita hiatrika ny famaranana amin'ny Afroleague faritra atsinanana ny GNBC. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 20 décembre 2019 07:03
Kitra: Hanangana « Académie de football » ny vondrona Filatex
Hanomboka amin’ny jolay 2020 ny tetikasa. Tonga teto Madagasikara niara-nampahafantatra ny fisian’ity tetikasa fananganana « Académie de football » an’ny vondrona Filatex ity, i Florent Malouda, mpilalao kitra frantsay sady ambasadaoron’ny UEFA (Union of European Football Associations), ary efa mpilalao tamina klioba samihafa tany Eoropa sy tany Inde, fa anisan’ny nahalalan’ny maro azy ankoatra ny naha tao amin’ny ekipam-pirenena frantsay azy dia izy tao amin’ny Chelsea. Endriky ny fandraisana anjaran’ny tsy miankina sy ireo orin'asa samihafa amin’ny fampiroboroboana ny kitra eto Madagasikara ny fananganan’ny vondrona Filatex ity « Académie de football » ity, toy ny efa nataon’ny Elgeco Plus, ny Cnaps, …
lundi, 16 décembre 2019 21:07
« Echec » - Tompondakan’i Afrika: Tanora valo mianadahy no miaro ny voninahitr’i Madagasikara
Tanterahina any Windkhoek Namibia nanomboka ny 14 desambra teo ka hatramin’ny 22 desambra 2019 ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny taranja « échec » natokana ho an’ny tanora latsaky ny 18 taona. Firenena miisa 11 no manana solontena mandray anjara amin’izany dia i Alzeria, Angola, Botswana, Egypta, Kenya, Madagasikara, Mali, Mozambika, Namibia, Afrika Atsimo ary Zimbaboe. Ny ekipa Malagasy dia ahitana an’ i Rabarison Ny Andolalaina Fitia Noah (U08G), Ramaroson Roy Valhero (U10G), Bakotsihoarana Rojoniaina (U10F), Randriamaharo Ny Avo Mitia (U12F), Andriamanalimanana Tsiresy Haja (U12G), Nomenjanahary Fanilo (U14G), Ramarolafy Grace Gloria (U16F) ary Razanadrakotoarisoa Toavina (U16G).
lundi, 16 décembre 2019 15:57
Mamitiana Rayan: Tompondakan’i Afrika amin’ny PES2020 taranja E-sport
Tontosa tany Tonizia ny andiany faharoa tamin’ny fifaninana iraisam-pirenena iadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin'ny taranja E-sport, na Electronic Sport, nokarakarain’ny Orange Esport Experience. Nisongadina i Madagasikara tamin’ny alalan’i Ralainaivo Mamitiana Herilanto na Rayan, izay voahosotra ho tompondaka tamin’ny PES2020. Natao tamin'ny 26 sy 27 oktobra 2019 ny fifanitsanana nisafidianana ireo izay hisolotena an’i Madagasikara amin’ity fifaninanana ity, ka i Mamitiana Rayan no nisolotena ny PES2020 ary Andry Tahina Haridjery no nisolo tena ny « Street fighter » teto Madagasikara.
Fihodinana in-telopolo ny farihin’Anosy amin’ny halaviran-dalana 90km no namarana ny « Tour de Madagascar » amin’ny hazakazaka am-bisikilety andiany faha-15 androany. Voahosotra ho tompondaka tamin’ity andiany ity Rakotoarivony Mazoni ka nosalorana ny akanjo mavo. Ny ekipan'ny BOA Madagasikara ihany koa no nibata ny amboara teo amin'ny filaharana isam-bondrona. I Amedé Houlder, 19 taona, teratany Malagasy no zandriny indrindra tamin'ireo mpandray anjara. Any Toliara no hiainga ny « Tour de Madagascar » andiany faha-16 amin'ny taona 2020. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 14 décembre 2019 19:00
Kitra - COSAFA U20: Madagasikara 1-5 Angola
Resin’i Angola tamin’ny isa mazava 5 noho 1 i Madagasikara androany tamin’ny lalao fiadian-toerana amin’ny COSAFA U20 tanterahina any Zambia. Nifarana ao amin’ny laharana fahaefatra i Madagasikara tamin’ity fifaninanana ity.
jeudi, 12 décembre 2019 23:29
Kitra- COSAFA U20: Nifarana teo amin’ny manasa-dalana ny dian’i Madagasikara
Resy teo amin’ny fandakana « Tirs au but » i Madagasikara nanoloana an’i Afrika Atsimo, rehefa nirava ady sahala 2 noho 2 taorian’ny fe-potoana ara-dalàna. Efa nitarika 2 noho 0 i Madagasikara teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny minitra fanampiny (90+2) ny Afrikana Tatsimo no nahasahala ny isa. Tafiditra avokoa ny baolina dimy nodakan’ny Bafana Bafana Afrikanina tatsimo nandritra ny « Tirs au but » raha toa ka efatra no matin’ny Barea an’i Madagasikara. Nomontsanin’i Zambia, mpampiantrano, tamin’ny isa 3 noho 0 kosa i Angola teo amin’ny lalao manasa-dalana faharoa androany. Hihaona amin’ny famaranana an’ity COSAFA U20 ity i Zambia sy Afrika Atsimo. Hiady laharana fahatelo kosa i Madagasikara sy Angola, lalao izay hatao amin’ny sabotsy 14 desambra 2019 izao ao amin’ny kianja Nkoloma Stadium ao Lusaka. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 10 décembre 2019 18:02
Kitra – COSAFA U20: Tafita amin’ny dingan’ny manasa-dalana i Madagasikara
Nandresy an’ny nosy Maorisy tamin’ny isa 2 noho 1 i Madagasikara androany. Efa nitarika tamin’ny isa 2 noho 0 isika teo ampialan-tsasatra. Fandresena roa sy ady sahala iray no azon’i Madagasikara tamin’ireo lalao telo nataony, vokatra izay mitondra azy ho amin’ny dingan’ny manasa-dalana. Hihaona amin’i Afrika Atsimo i Madagasikara amin’ny lalao manasa-dalana voalohany, ary i Zambia mpampiantrano sy Angola ny lalao manasa-dalana faharoa, izay samy hotanterahina amin’ny 12 desambra izao. (Jereo Sary Tohiny)